ဝင်းမော်ဦး မော်ကွန်း | MoeMaKa Burmese News & Media
(ညီမလေး ဝင်းမော်ဦးသို့ ….)
5 Responses to ဝင်းမော်ဦး မော်ကွန်း
မောင်ပျာလောင် on August 30, 2012 at 3:59 am
shwethanhtay on August 30, 2012 at 11:48 am
၀င်းမော်ဦး အ.လ.က (၄) ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ဦးကြွယ်ဟိုးလမ်း၊ မကြီးကြီးရပ်ကွက်။
leomaung on August 31, 2012 at 10:11 am
If possible I would like to know the brave boys helping her in the phptos,and brief on the event.
i really wish the girl be in highest heaven.
မောင်ပျာလောင် on September 1, 2012 at 4:57 am
Leomaung မ၀င်းမော်ဦးကို ကူညီနေတဲ့ လူငယ်နှစ်ဦးဟာ ဆေးကျောင်းပြီးခါစ ဟောက်စ်ဆင်းနေတဲ့ ဆရာဝန်နှစ်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးကို စစ် ထောက်လှန်းရေးက စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး ကို့ ကိုယ်ကို သတ်သေတယ်ဆိုပြီး အပြောက်ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့အကြောင်းတွေရေးထားတဲ့စာဆောင်တွေရှိပါတယ်၊ ရှာဖတ်ကြည့်ပါ။
justforyou.hate on September 4, 2012 at 7:10 am